Shiinaha Shiinaha Warshada 8M 10M Midabee Habee Hawada Hawada Trick Pool sabayn kara Yoga Mat 0395 Soosaarka iyo Warshadda | Yamazonhome
Warshadda Shiinaha 8M 10M Midabee Habee Hayalka Hawada Hawada Hawada La Shimbiro Yoga Mat 0395
Shiinaha Factory 8M 10M Midabee Habee Hawada Trick Barkadda Ballaaran Yoga Mat 0395
Magaca Badeecada: Matga la buufin karo
Lambarada alaabta: Amal-0395
Goobta wax soo saarka: Weifang, Shandong
Waxyaabaha: PVC iyo EVA
Cabbirka: 600 * 100 * 10cm, 200 * 33 * 3cm, oo la habeeyay
Midabka: madow, buluug, casaan, cagaar, habeysan
Waqtiga diyaarinta tusaalaha: qiyaastii hal toddobaad
1. Magaca wax soo saarka Laambada Yoga Mat / hawada
2.Nacsiga Magaca YITEK
3.Beesha Asalka JiangSu, Shiinaha
4.E-saar La heli karo
5.Waxyaabaha DWF iyo PVC
6.Qiyaas 6x1x0.1 M
7.Qalab Madow, Casaan, Buluug, Mint, Midab, Casaan
In ka badan 10 Midab
Muuqaalka Wax soo saarka La qaadan karo & sabayn
9.MOQ 1 Cadad
10.Standard Sample Time 4-7 maalmood
11. Codsi Isboortiga Biyaha, Tumbaynta, Yoga, Jimicsiga, IWM
13 xirmo Marka loo eego Codsiga Macaamiisha
Furayaasha la buufin karo iyo furaha la buufin karo
Furayaasha la buufin karo iyo fiilada la buufin karo ayaa si sax ah loo farsameeyay si ay u yeeshaan hawo heer sare ah, ka hortagga boodhka qiiqa oo si aan kala sooc lahayn loo dhigo iyada oo aan la dilin.
Sawirka tayada sare leh ayaa lagu ballaariyay gudaha, qalabka wax lagu sawirana wuxuu ka sameysan yahay giraan iyo qalab wax lagu sawirayo, oo leh awood qaadasho xoog leh oo aan isbeddel lahayn.
Riix riix farsamada alxanka tiknoolajiyada sare waxay si weyn u dheereyneysaa nolosha adeegga sheyga, waxay hagaajineysaa waxqabadka sheyga iyo amniga isticmaalaha.
Daraasad qoto dheer iyo ku celcelis ah laba jibbaarid. Waxaan u dhameystirnaa shey kasta sida farsamada gacanta, sidaas darteed waxaan heysanaa tiknoolajiyad baako laba-lakab oo aad u fiican.
Waxay leedahay nidaam xakamaynta tayada adag waxayna ku raaxeysataa sumcad wanaagsan suuqa. Farsamo yaqaanno xirfad leh iyo qalab dhammaystiran ayaa bixiya karti wax soo saar oo wanaagsan iyo karti-abuurnimo xoog leh, iyo tirada ugu yar ee amarka xaddideysa alaabada tayada sare leh. Qiimaha tartan ee warshadda iyo adeegyada hal-joogsiga ah ee tayada sare leh waxay bixiyaan adeegyo gaarsiin deg deg ah oo waqtigooda loogu talagalay kuwa wax ku iibiya ee internetka sida Amazon.
1. FedEx / DHL / UPS / EMS, Albaab-ilaa-Albaab;
2. Hawada ama Badda haddii cabbir ballaaran, Gegada Diyaaradaha / Dekedda qaata;
3. Macaamiisha cayimaya xamuulayaasha xamuulka ama hababka maraakiibta gorgortanka laga gelayo!
4. Waqtiga Gaarsiinta: 1 ~ 3 maalmood oo shaqo haddii ay jiraan; 3-7 maalmood haddii aad bilowdo amarka, iyadoo kuxiran tirada.
1.Kahadalka Midabka & Xajmiga:
Midabyo kala duwan iyo cabbirka aad dooratay. Intaa waxaa dheer, waxaad ku siin kartaa cabbirkaaga warshaddeena si loo habeeyo.
Ku saabsan Xirxirida:
bac, kartoono, sanduuqa midabka caadada ah, bacaha la tolay.
Waqtiga wax soo saarka:
Waqtiga caadiga ahi waa 5-10 maalmood, haddii amar degdeg ahi yar yahay, horay ayaan uga dhigi karnaa. Taa bedelkeeda, haddii qty aad u weyn yahay, waxaan arki doonaa qty si aan u hubino waqtiga dhalmada.
4. Ku saabsan adeegga:
Weydiimaha waxaa laga jawaabi doonaa waqtiga ugu horeeya ee aan helno. waxaan nahay daacad, xirfadle, markasta waxaan noqoneynaa dhankaaga, waxaan kuu adeegidoonaa kahor dalabka meesha ilaa aad ka iibiso.
Shixnad ku saabsan:
EXW, FOB, CIF, albaab ilaa albaab, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa diyaar inoo ah.
Hubinta sheyga kahor intaan alaab-qeybiyaha na siinin.
Hubinta alaabada la gooyey intaadan bilaabin soo saarida.
Hubinta tolliinka iyo habraac kasta marka la soo saarayo.
Hubinta suufka la buufin karo markale ka hor intaadan xirxirin.
Hubinta qty markii lagu buuxiyay kartoon
Hubinta kartoonnada oo dhan inta aan la rarin.
Nidaamka caadiga ah ee wax soo saarka bacaha oo dhan:
Waxsoosaarka ballaaran wuxuu xaqiijinayaa-Iibsaa wax-jarid-bilaw si aad u soo saarto oo aad ugu tosho hal tallaabo tallaabada-la buufin karo-shixnadda-rarka
Hore: Sariirta Sariirta Sariirta ee Sunta Sariirta Sariirta Sariirta Sariirta Princess # 0114
Xiga: Grooved xamili laba-sawir-sariirta dhinaceeda alwaax adag alwaax adag golaha wasiirada # 0121
Qoryaha Nordic Simple Solid waa la Kicin karaa oo Lowe ...
Nordic Simple Solid Wood Guri Yar Livin ...
Qolka Jiifka Taxanaha Bakaylaha 0246
Jimicsiga Hawada Mat 2m 3m 4m Inflat xirfadle ah ...
Qaab-dhismeedka Qoryaha Yar-yar # Sofa ee Carruurta 0185